DekTec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card dia afaka mampisondrotra ny famokarana horonan-tsary ary mizara ho an'ny mpandefa | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Dektec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card dia afaka mampiroborobo ny famokarana horonantsary sy ny fizarana ho an'ireo mpampita vaovao
Dektec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card dia afaka mampiroborobo ny famokarana horonantsary sy ny fizarana ho an'ireo mpampita vaovao
Nanome fihodinana vaovao iray manontolo ny famoronana horonantsary, ary ny fizarana fizarana dia mahatonga ny hetsika fananganana mpihaino ho lasa mampientam-po kokoa ho an'ny mpamorona famoronana. Ny matihanina amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia mitady fomba vaovao hanamboarana votoaty tsara kokoa ary ahafahany miditra mora kokoa amin'ny mpihaino azy io raha mitombo hatrany. Raha misy fomba iray hanatsarana ireo matihanina matihanina hanatsarana ny fahaizan'izy ireo amin'ny famoronana video DecTek manana ny vahaolana, ary ao anatin'izy ireo izany Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card, ny DTA-2174B.
Hatramin'ny 2004, DekTec dia nanolotra matihanina TV matihanina sy singa maoderina sy rindrambaiko miorina amin'ny PC fenitra lafo vidy. Ny orinasa dia manome fitaovana PCI-E, USB-2, USB-3 ary mahaleo tena hametahana ny solosaina ho any amin'ny serasera horonantsary nomerika ho an'ny fampitaovana horonan-tsarimihetsika, laboratoara fitsapana, na fampidirana OEM. DekTec ny ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny vidin'ny CPU maoderina ambany sy avo lenta mba hamolavolana vahaolana mahomby sy mahomby. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Video Video I / O sy ny birao fanodinana.
Marobe DekTec ny ny vokatra dia manohana ny ASI, TSoIP, RF, SDI, ary UHD I / O, ary manolotra modulators sy demodulators fitsapana ho an'ny ankamaroan'ny fenitra izy ireo. Anisany amin'ireto fenitra mahazaka ireto ireto misy
Izay mpandray anjara amin'ny fampitaovana fandaharana PC-based dia afaka mampiditra DekTec ny Karatra PCIe ho mpifanaraka amin'ny interface ao amin'ny rafitr'izy ireo. Ny fizotrany dia antsoina hoe "OEM" izay ampiharina ny vidin'ny fitaovana manokana. Ny ankamaroan'ny fitaovana USB an'ny orinasa dia misy tsy misy tranga toy ny fitaovana OEM. Ho fampifangaroana ny fitaovany miaraka amin'ny rindranasan'ny mpampiasa, DekTeck dia manolotra SDK maimaim-poana ho an'ny Linux sy Windows, izay fahita amin'ny lozarany rehetra.
Ho fanampin'ny fananana vidiny manintona ho an'ny mpamorona, ny DekTec's DTA-2174B karatra dia miasa ho mpandimby mahavariana miaraka amin'ny karatra 3G-SDI malaza. Ity fitaovana ity koa dia manana latency ambany sy fanohanana 12G-SDI amin'ny seranan-tsambo 1, izay mahatonga azy ho mahaliana kokoa ho an'ny mpamorona ny famokarana horonantsary sy fitaovana fitsinjarana mihoatra noho ny teo alohany. Ireo rehetra DTA-2174B ny Ny seranan-tsambo dia manohana ny DVB-ASI, ary izany no ahafahan'ny fangatahana mifangaro / tsy voatazona mifangaro toy ny encoder 4K miaraka amin'ny fidirana 12G-SDI sy famoahana ASI, na decoder 4K misy famandrihana ASI sy famoahana 12G-SDI.
Fitaovana iray miasa eo anilan'ny DTA-2174B karatra io dia ny DekTec Matrix API® 2.0, izay manome alalana mpampiasa iray hamorona rindranasa mahazatra ho an'ny DTA-2174B. Maromaro ny endri-javatra Matrix-API ahitana:
Ampidiro na alaivo ny rakitra am-peo / horonan-tsary na rakitra ANC
Ny fiovam-po endrika Pixel
The DTA-2174B ny Ny serasera firmware dia misy seranan-tsambo efatra efatra, ary tsirairay azo adino ny miasa toy ny ASI na SD /HD/ Fidirana 3G-SDI na famoahana entana. Ny seranan-tsambo tsirairay dia afaka miasa toy ny dika mitovy doka amin'ny seranan-tsambo hafa iray mba hanaovany dika mitovy maro amin'ny marika mamoaka azy. Ny seranan-tsambo namboarina ho vokarina dia azo ampitovina amin'ny seranan-tsofera bi- / tri-level genlock.
DekTec ny DTA-2174B no mpikambana faharoa amin'ny laharam-pifaneraserana vaovao an'ny SDI / ASI an'ny PCIe ho an'ny PCIe, ary ireo karatra ireo dia manome isan'ny seranan-tseranana roa karazana, amin'ny vidin'ny lisitra tena mifaninana.
Ho an'ny vidiny tsara sy fampahalalana bebe kokoa momba ny DTA-2174B karatra, mitsidika www.dektec.com/news/2020/#Feb20.
Maninona no tokony hifidy ny DekTec ny Broadcasters
Tao anatin'ny enina ambin'ny folo taona taorian'ny nanombohany, i DekTec dia mpisava lalana ao amin'ny ATSC 3.0. Tamin'izany fotoana izany dia nanolotra modulator fanadinana sy mpandray izy, miaraka amin'ny fanomezana rindrambaiko fitaovana fanandramana marobe izay ahitana StreamXpert ho an'ny MPEG-2 TS, OTT tena izy na fanadihadiana an-tserasera, SdEye ho an'ny SDI sy UHD (4K) tsy voafehy miaraka amin'ny fanaraha-maso HDR.
DekTec dia manohana ny HEVC, H.264, famakafakana AC-4, sy ny maro hafa. Izy io koa dia manome vokatra ho an'ny mpanjifa farany, ny resellers, integrator, na OEM miaraka amin'ny fametrahana ao amin'ny Broadcast, Cable, Satellite, IPTV, Signage nomerika, fampiharana ara-pitsaboana, miaramila, fiarovana an-tanindrazana, sns .. Ny orinasa dia manolotra vahaolana fitiliana sy fandrefesana marobe ho an'ny lohateny na ho an'ny fampiharana fanaraha-maso lavitra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny DekTec, tsidiho www.dektec.com/.
fampitana orinasa matihanina mpandefa Content Creation DecTek Distribution DTA-2174B Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card 2020-05-24
Previous: Ny Draco vario ultra HDMI 2.0 dia miteraka fizarana horonantsary avo lenta
Next: Mpanakanto zokiolona / Mpandrafitra sary Motion